Kuuriyada waqooyi oo ku guuldareysatay tijaabo gantaal - BBC News Somali
16 Abriil 2017
Milateriga dalka Kuuriyada waqooyi
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in gantaalkaasi uu burburay ilbiriqsiyo kaddib markii la gamay.
Xukumada Pyongyang ayaa horay shan jeer u tijaabisay hubka Nukleyrka iyo dhowr gantaal, taasi oo ka soo horjeeda qaraarkii Qaramada Midoobay.
"Kuuriyada Waqooyi waxa ay isku dayday in ay ku tijaabiso gantaal aan noociisa la sheegin ''bariga dekadda Sinpo,'' waxaa sidaasi sheegay wasiirka gaashaandhiga Kuuriyada Koonfureed, wuxuuna intaa ku daray in tijaabadan ay guul daraystay ".
Awooda milateri ee Kuuriyada waqooyi.
"Gantaalka ayaase burburay islamrkiiba," waxaa sidaasi wakaalada wararka ee Reuters u sheegay abaanduulaha ciidamada badda Maraykanka Mr Dave Benha.
Maalintii Sabtida ayay ahayd markii Kuuriya Waqooyi laga xusay 105 guuradii ka soo wareegatay dhalashada ninkii dhidabada u aasay dalkaasi oo lagu magacaabi jiray Kim Il-sung, waxaa ayna dowladda Kuuriyada Waqooyi hakaasi kusoo bandhigtay awoodeedaa milateri.
Daalibaan oo amarro adag kusoo rogay goobaha timaha lagu jarto ee Afghanistan